मानिसहरूले दूरी कायम नगरे सरकारले लकडाउन गर्न सक्छः डब्ल्यूएचओका नेपाल प्रतिनिधि डा. भ्याण्डेलर –
नेपाल सरकारले लकडाउनलाई हटाएपछि संक्रमणको दर झनै बढ्ने संकेत देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका लागायत देशका मख्य ठूला सहरहरुमा समुदाय स्तरमा संक्रमण देखा परेको छ । संक्रमण दर पनि बढ्दै गएको छ । लकडाउन खुलेसँगै मानिसहरुको आवागमन पनि बढेको छ । संक्रमितहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा संक्रमण फैलिने सम्भावना बढेको छ । यसलाई पछिल्लो समय समुदायमा संक्रमणका केसहरु देखिनुले पुष्टि गरेको छ । यति नै बेला सरकारले गलत समयमा लकडाउन गर्ने र गलत समयमा खोल्ने काम गरेको भन्दै आलोचना गर्नेहरु पनि धेरै छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा कोरोनाको अवस्था बारे कसरी हेरीरहेको छ । के नेपालमा महामारी फैलने खतराको संकेत देखा पर्न लागेको हो ? लकडाउन फेरी आवस्यक छ ? यीनै प्रश्नसहित विश्व स्वाथ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डा. जोस भ्याण्डेलरसँग गरिएको कुराकानी ।
हेर्दाखेरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो अवस्था आउने बारे सरकारलाई सचेत त गराएको देखिएन । कि गराएको थियो ? के तपाईलाई सम्झना छ ?
संक्रमितहरूको सङ्ख्या विस्तारै बढ्दै गइरहेको हामीले देखिरहेका छौं र प्रेसले पनि यो विषय उठाइरहेको छ । उसो भए, हामीले के गर्न सक्छौं त ? हामीले पक्कै केही गर्न सक्छौँ भनेर हामीलाई थाहा छ । हामीले गर्न सक्ने भनेको दूरी कायम गर्ने हो । यो भाइरस यत्तिकै फैलिएको होइन । एक व्यक्ति संक्रमित भएपछि अर्को व्यक्ति संक्रमित हुनका लागि भाइरस सर्नु पर्दछ । यदि हामीबीच पर्याप्त दूरी भएमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भाइरस सर्नका लागि धेरै गाह्रो पर्दछ । हामीले अपनाउनु पर्ने भनेर सधैँ भनेर पनि नपुग्ने यो नै सबैभन्दा आधारभूत नियम हो । कुनै पसलमा कुनै सामान किन्दा होस् वा कतै बाहिर जाँदा होस वा बसमा यात्रा गर्दा नै किन नहोस्, जहाँसुकै पनि तपाईँले यो नियमको अनुसरण गर्नुपर्दछ । आफू र अर्को जोकोही व्यक्तिबीच कम्तीमा १ मिटरको दूरी भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यदि तपाईले आफ्नो हात फैलाउँदा अर्को व्यक्तिलाई छुन सक्नुहुन्छ भने तपाई एकदमै नजिक हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुहोस् । हामीले गर्नुपर्ने आधारभूत कुरा नै त्यही हो । धेरै मान्छेहरू भएको वातावरणमा मास्कले सहयोग गर्दछ । मास्क लगाउनाले सहयोग गर्दछ, किनभने, यदि संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा बोल्दा, भाइरस उत्पादन हुन्छ र बाहिर निस्किन सक्छ । भाइरस धेरै पर पुग्दैन तर यदि कोही मानिसहरू वरिपरि भएमा र पर्याप्त दूरी कायम गर्न नसकिएमा, मास्कले भाइरसलाई धेरै पर पुग्नबाट रोक्छ । त्यसैले, मास्कले निश्चय नै सहयोग गर्दछ, तर मास्क लगाएको छ भन्दैमा दूरी कायम नगरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिं होइन । त्यस्तो गर्नु हुँदैन । दूरी कायम गर्नु धेरै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । मास्कले सहयोग गर्छ, हात धुँदा सहयोग हुन्छ, खोक्दा अपनाइने व्यवहारले सहयोग गर्दछ । यी कुराहरू महत्वपूर्ण हुन् ।
« कोभिड १९ अर्थतन्त्रमा प्रभाव,२२ दशमलव ५ प्रतिशतले गुमाए रोजगारी
युएईको सबैभन्दा ठूला बजारको भीषण आगलागी, नियन्त्रण प्रयास जारी »